एमाले एकताको विघटित कार्यदलको बैठक सकीयो, के भयो निर्णय ? - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
एमाले एकताको विघटित कार्यदलको बैठक सकीयो, के भयो निर्णय ?
नेकपा एमाले एकताको विघटित कार्यदलका नेताहरूबीचको छलफल सकिएको छ। एक नेताक अनुसार बैठक कुनै ठोस निर्णयविना सकिएको छ । शनिबार सिंहदरबारमा बसेको अनौपचारिक बैठकले कुनै निर्णय निकाल्न नसकेको हो ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार ३ बजे स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको सन्दर्भमा कार्यदलका सदस्यहरुबीच छलफलमा जुटेका थिए । तर, आजको छलफल निष्कर्षविहीन बनेको छ । नेकपा ओली पक्षका नेता सुवास नेम्वाङले आफूहरु निरन्तर छलफलमा लागिरहेको बताउँदै भने, ‘हामी पार्टी एकताका पक्षमा निरन्तर लागि रहेकै छौँ ।’
नेता गोकर्ण विष्टले पनि आफूहरु पार्टी एकतालाई जोगाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । उनले पार्टीलाई कसरी एकतावद्ध बनाएर लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले यसअघि भएको १० बुँदे सहमतिलाई मुख्य आधार बनाएर छलफल भएको बताए । एकतामा धेरै ढिला हुँदा पार्टीमा क्षति पुग्ने उनको भनाइ छ ।
यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार नेकपा एमालेको काठमाडौं जिल्ला कमिटीको बैठकमा पार्टीमा अब माधव नेपालका लागि ठाउँ नभएको बताएका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालका लागि पार्टीमा ठाउँ नभएको बताए । ‘माधव नेपालजस्ताका लागि पार्टीमा कुनै ठाउँ छैन, वामपन्थी सरकार ढाल्ने दक्षिणपन्थी सरकार बनाउने, विश्वासको मत दिने’ उनले भने ‘आफ्नो पार्टीका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा नदिने, दक्षिण पन्थीको सरकारलाई विश्वासको मत दिन फ्लोर क्रस गर्ने, त्यस्ताका लागि ठाउँ छैन ।’